Ny fikarakarana ara-pahasalamana sy ny chef Bobby Chinn dia mamoaka rahona gourmet vaovao mahasalama
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny fikarakarana ara-pahasalamana sy ny chef Bobby Chinn dia mamoaka rahona gourmet vaovao mahasalama
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Entertainment • Hospitality Industry • Vaovao • People • News sustainability • teknolojia • Tourism • Etazonia Vaovao Vaovao
Borderless Healthcare Group, mpisava lalana manerantany amin'ny teknolojia momba ny fahasalamana, haino aman-jery, fifandraisan-davitra, atiny ary serivisy, dia namolavola Delicious. Fahasalamana, rahona gourmet mahasalama voalohany mifandray eran'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny mpiara-miasa, chef fanta-daza iraisam-pirenena Bobby Chinn, hanolotra sehatra studio ho an'ny chef na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao ity serivisy vaovao ity mba hamoronana programa fandrahoan-tsakafo ho azy ireo.
Ity maodely vaovao amin'ny fiaraha-miasa miaraka ity dia antenaina hahatratra ny maodely mitohy ankehitriny amin'ny kilasy fandrahoan-tserasera.
Ireo mpanjifa izao dia tsy maniry fatratra hianatra mahandro sakafo matsiro izay mahasalama ihany koa.
Ny fitomboan'ny fitomboan'ny sakafo, ny fahasalamana ary ny teknolojia manolotra fotoana lehibe tsy ampoizina ho an'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny.
"Ny famelana ny chef haneho ny fomba fahandro mahasalama azy ireo miaraka amin'ireo matihanina momba ny fahasalamana ary ireo mpikarakara tokantrano an-tapitrisany dia zava-bita lehibe, na amin'ny fahalalana izany na amin'ny endrika fampisehoana," hoy ny fanazavan'i Dr Wei Siang Yu, filoha sady mpanorina ny Borderless Healthcare Group. “Ity maodely vaovao amin'ny fiaraha-miasa miaraka ity dia antenaina hahatratra ny maodely mitohy ankehitriny amin'ny kilasy fandrahoan-tserasera. Matoky izahay fa ny mpanjifa izao dia tsy maniry fatratra ny hahay mahandro sakafo matsiro izay mahasalama ihany koa. ”
"Faly aho fa anisan'ny Delicious. Fahasalamana hametahana ny culinary gourmet miaraka amin'ny fahalalana ara-tsiansa momba ny sakafo sy ny fahasalamana amin'ny maha-karazana" meditainment "vaovao natombok'i Borderless Healthcare Group," hoy ny Chef Bobby Chinn.
Araka ny fikarohana nataon'ny tsena, ny tsenan'ny sakafo ara-pahasalamana sy fahasalamana manerantany miaraka amin'ny tsena rahona sy tsena fandefasana sakafo an-tserasera dia antenaina hahatratra $ 394.75 miliara amin'ny 2028. Rehefa mihazakazaka mankamin'ny safidy mahasalama sy mahandro sakafo ao an-trano ny Borderless Healthcare Group ny fitomboan'ny fihomboan'ny sakafo, ny fahasalamana ary ny teknolojia manolotra fotoana lehibe tsy ampoizina ho an'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny.
Delicious .Ny fahasalamana dia mamela ny mpahandro sakafo sy ny orinasam-panompoana sakafo hifandray sy hiara-hiasa amin'ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana, fahasalamana ary ny siansa momba ny sakafo miaraka amina mpanohana azy ireo amin'ny fiteny maro samihafa mba hamoronana fomba fahandro mahomby ho an'ny mpanjifa salama saina. Ny sehatra dia manolotra vahaolana e-varotra mifangaro ho an'ny marika sakafo hiaraha-miasa amin'ny mpahandro ary hamorona traikefa momba ny kulinarina marika izay ahafahan'ny mpanjifa mividy vokatra asongadina ao amin'ny Delicious. Fahasalamana. Natao ihany koa izy io mba hahafahan'ny mpanjifa miara-mahandro sakafo mivantana amin'ny chef malaza sy hanohana ireo marika sakafo mahasalama hananana varotra omnichannel matanjaka. Delicious. Health dia mikendry ny hampivadika ny atiny, serivisy, vokatra, faharanitan-tsaina artifisialy ary ny Internet of Things (IoT) ho rahona iray ahafahan'ny mpahandro mihinana mivantana amin'ireo mpanjifany.
Ao anatin'ny telo volana ho avy, Delicious. Fahasalamana dia hamoaka serivisy ho an'ny chef mba hampiaina mivantana ny fomba fahandro gourmet azy ireo. Chef mpandray anjara dia hametaka plug vaovao sy milalao teknolojia vaovao hanaovana fandaharana fandrahoan-tsakafo manokana na hetsika an-tserasera an-tserasera. Ny mpanjifa dia afaka misoratra anarana ao amin'ny Delicious. Fahasalamana hanatevin-daharana hetsika isan-karazany amin'ny Internet. Ny fanombohana ny Delicious. Fahasalamana no dingana voalohany hanohizan'ity rahona vaovao ity manohana ny hetahetan'ny chef ho tonga rockstar sakafo omnichannel.
Delicious. Fahasalamana dia hanomboka seho mivantana amin'ny fandrahoan-tsakafo miaraka amina chef fanta-daza voafantina ao anatin'izany ny andiany miaraka amin'ny chef malaza Bobby Chinn hanampiana ireo vaovao hanomboka ny mpanamory fahitalavitra azy manokana. Bobby Chinn dia nanangana ny tenany ho toy ny rockstar culinary manerana an'i Azia sy Moyen Orient, avy amin'ny fampiatrano ny andiany fahitalavitra "World Café Asia" nahazo loka tamin'ny Discovery TLC ary nanjary lalao maharitra tao amin'ny "Top Chef Middle East" an'ny MBC, iray amin'ireo fampisehoana fahandroana malaza any Moyen Orient sy Afrika Avaratra.
Delicious. Fahasalamana dia hanangana ny sehatry ny fandrahoana miaraka aminy izay ahafahan'ny mpanjifa misoratra anarana amin'ny hetsika fandrahoan-tsakafo mivantana miaraka amin'ny chef malaza sy olo-malaza momba ny fahasalamana sy ny fahasalamana.
Hisy fanavaozam-baovao bebe kokoa momba ny hetsika fandrahoan-tsakafo mivantana ho an'ny mpanjifa ao amin'ny matsiro. Fahasalamana.
Momba ny vondrona fitsaboana tsy misy sisin-tany
Niorina tamin'ny taona 2008, Borderless Healthcare Group (BHG) dia mpisava lalana manerantany amin'ny toekarena ara-pahasalamana mifototra amin'ny mpanjifa izay iarahan'ny teknolojia, serivisy, atiny, media, vokatra ary siansa angona mifamatotra amin'ny rafitra eko-n'ny vondron'orinasa manerantany manomboka amin'ny fahasalamana, tsy fahampiana taona. , fahasalamana, sakafo mahavelona, ​​teknolojia, haino aman-jery, banky bio, serivisy rahona, faharanitan-tsaina artifisialy, fandraisana vahiny ary fampiasam-bola. Ny ankamaroan'ny hetsiky ny BHG dia hatrany am-boalohany ary maro no mikendry ny hanakorontana na hanovana ny fizarana sy ny famatsiana ny tobim-pahasalamana. Raha mila fanazavana fanampiny, visit here.
Momba an'i Chef Bobby Chinn
Bobby Chinn dia fantatry ny beso ho olom-banona amin'ny haino aman-jery, chef fanta-daza ary tompon'ilay franchise "World Café" nahomby be. Izy dia mpifaninana maharitra amin'ny "Top Chef Middle East" ary mampiantrano ny "Keep It Simple" izay natomboka tamin'ny taona 2020. Tamin'ny diany nankany amin'ny chef malaza, mpanoratra ary restaurateur fanta-daza iraisam-pirenena, Bobby dia nametraka ny tenany ho fototry ny fantsona sakafo manerantany tambajotra ary ekena fa manam-pahaizana momba ny nahandro aziatika sy afovoany atsinanana izy. Bobby dia mpisolovava an'i maharitra, sakafo miorina amin'ny zavamaniry ary mankafy ny fikarakarana lovia vaovao hanehoana ireo filana ireo. Izy dia miseho matetika amin'ny maha-Chef vahiny azy amin'ny seho fandrahoan-tsakafo ankafizin'izao tontolo izao ary niara-niasa tamin'ny olona toa an'i Keith Floyd, Martha Stewart, Anthony Bourdain, Antony Worrall Thompson ary Andrew Zimmern. I Bobby koa dia masoivoho Vietnamianina teo aloha momba ny fizahantany any amin'ny EU. Bebe kokoa momba an'i Bobby Chinn.